Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): YAWN HKYEN SHIGA
at 10/13/2013 11:58:00 AM
မြစ်ကြီးနား ကက်သလစ်သာသနာ ၊ သာသနာ့ အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ ဒုဥက္ကဌ ၊ဒေါ်ဆွမ်ဖေါင့် ဆိုင်းရော် (Kachin Alliance,USA) ၊မဆွမ်ဖေါင့် ဂျာအိန် (USA) ၊ကိုဆွမ်ဖေါင့် နော်ဆိုင်း (USA)၊ Rev.Fr. ဆွမ်ဖေါင့် ဇော်အောင်(Hongkon) ၊ကိုဆွမ်ဖေါင့် ဂျာလ (Australia), ၊ တို့ ၏ချစ်လှစွာသော ကျေးဇူးရှင် ဖခင် ဆရာ ကြီး ဦးပက်ထရစ် ဆွမ်ဖေါင့် ဆင်ဝါးနော် အသက် (၆၅) နှစ် သည် (၁၂.၁၀.၂၀၁၃) ရက်နေ့ နံနက် (၈း၃၀) အချိန် ခရစ်တော် ၌ အိမ်ပျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ သို့ ဖြစ်၍ကျန်ရစ်သူ မိသားစုဝင်များ နှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရပါသည်။ ဆရာ့ ၏ ၀ိညာဉ် သည် အရှင့် အထံတော် ၌ ငြိမ်းချမ်း ငြိမ်သက်စွာ ခိုလုံ နိုင်ပါ စေ။
Myitkyina Saradaw Ginwang, Mungbawng Hpung, Ning Tau Ningbaw, Tsumhpawng Seng Raw (Kachin Alliance, USA), Shy.Tsumhpawng Ja Ing ,Shd. Tsumhpawng Naw Seng (USA)၊Wa Jau Tsumhpawng Zau Aung (Hongkong), Tsumhpawng Ja La (Australia) niatsawra dik ai chying hkai kawa Sara Patrick Tsumhpawng Sin Wa Naw, Asak (65) ning gaw, October 12, 2013 ya jahpawt 8:30 a.m hta Madu Yesu hta yup pyaw mat wa sai lam shiga na chye lu ai. Saraawenyi ngwi pyaw ai ja mungdan hta ning ngai nga lu u ga. Ngam nga ai nta masha ni yawngatsa mung Madu Yesu shalan shabran shaman chyeju jaw ya u ga. — with Lachid Oversea and 18 others.